मसीहीहरूले समाजमा दुष्ट विरुद्ध कुनै तोड  | Apg29
को अधिकारीहरु जेलमा बन्द गर्न बाध्य छन्, र Riva 
हामी टिभि सेट अगाडि बसेर सबै हिंसा, सबै debauchery, अपराध र यति मा हेर्न जब हामी shudder। जब हामी शरीर र मान्छे मारिए नातेदार लागि शोक मा रो आक्रान्त छविहरू संग युद्ध हेर्न हामी एकछिन दया शायद थाहा छ। हामी भन्छन्, "ओह, कसरी भयानक, भयानक" हामी देख्न र यो भयानक समाचार सुन्दा।
तर सबै प्रतिबद्धता हामी हासिल छ? हामी आफूलाई यो सन्तुष्ट हुन गरौं? हामी ख्रीष्टियनहरू सबै दुष्कर्मलाई एक हटाउने के हुन छन्?
म परमेश्वरको आत्मा हुन थियो जहाँ देशहरूको सुनेको छु। जहाँ मान्छे उपवास बसिसक्नुभएकोले, रोए र पुनरुद्धार शक्ति परमेश्वरको पुकारे। प्रभु आफ्नो प्रार्थना सुन्नुभयो र आफ्नो आँसु देखेको र शक्तिशाली पुनरुद्धार पठाए।
पवित्र आत्मा त शक्तिशाली मात्र "साधारण सभ्य मान्छे" सुरक्षित गरिएका छैन भनेर काम छ, तर पनि drunkards, दबाइ नशेडी र अपराधीहरूलाई।
मुक्तिको त्यसैले यी गरिब मान्छे को गहिराई मा सारियो छ, तिनीहरूले भरिएको र अपराध दुवै को पूर्ण निःशुल्क हुन्छन्।
को अधिकारीहरु जेलमा बन्द गर्न बाध्य छन्, र Riva जेलमा, येशूले फैशन गरिएको छ मान्छे आफ्नो जीवन परिवर्तन।
तर के हामी स्वीडेन मा सहज मसीहीहरू हुन्? हामी पाप र दुष्ट विरुद्ध तोड फारम गर्न सक्छन् भनेर हामी बाँच्न के? हामी "रिपोर्ट" मा दयनीय एकाइहरु देखेको छु पछि र "वर्तमान" एक समय को लागि बस काँध मा हामी Shrugging?
हामी सबै दुष्ट, पाप र मालिन्य यो देशमा प्रशस्त विरुद्ध प्रार्थनामा सङ्घर्ष? हामी कुरा एक फरक आदेश हासिल गर्न bönekampen मा आफूलाई बलिदान गर्न तयार हुन्छन्। हामी परमेश्वरले हामीलाई "पर्खाल मा watchmen" गर्न चाहन्छ भनेर बुझ्न पर्छ
इज मा। 13:5हामी यी गम्भीर र चुनौतीपूर्ण शब्दहरू पाउन:
"तपाईं यसलाई प्रभुको दिन युद्धमा खडा गर्न सक्षम भएको छ भनेर अंतराल मा अप गएका छन् छैन, न त इस्राएलको घर लागि भ्काडी अप गरे।"
हामी पनि इजकिएल मा पढ्नुहोस्। 22:30:
"म माथि भ्काडी गर्नुपर्छ, र खाली म यसलाई नष्ट हुँदैन भनेर, देशमा मलाई खडा, तिनीहरूलाई बीचमा खोजी; तर म कुनै पनि फेला परेन। "
म परमेश्वरको राजीनामा गर्न सक्नुहुन्छ, प्रभु थाहा छैन, तर उहाँ भन्नुहुन्छ आपूर्ति गर्दा यो वास्तवमा यति देखिन्छ, "तर म कुनै पनि फेला परेन।" के एउटा दुःखद घटना! प्रभु हामीलाई खडा र मुछिन गर्न चाहनुहुन्छ। उहाँले स्वीडेन मा कसैले पाता? होइन, कुनै! अधिकांश मसीहीहरूले सुतेको मनतातो खातिर गहिरो निद्रामा।
हाम्रो गरिब fatherland र हाम्रो मान्छे को रक्षा मा "अंतर खडा" गर्ने लगभग कुनै एक छ। जिम्मेवारी हामीलाई मसीहीहरूलाई भारी खण्डमा। हामी अब्राहाम रूपमा गर्नुपर्छ। उहाँले "परमेश्वरको नजिक आए" उहाँले सदोम सुरक्षित हुन भनेर सोध्दा।
यो कि लार्स Linderot द्वारा पुरानो भजन पद2को सुरुमा यसो भन्छन्:
"द अवरोध धेरै छन्, मेरो प्राण प्रतिरोध छन्। शैतानले तपाईं Indulge ग्रेस छैन। आफ्नो राम्रो बाधा भनेर केहि को अग्रिम स्ट्रिङ अप। संसारको वेल्स नत्याग्नुहोस्।
यो एक पाठक इमेल छ। लेखकको राय Apg29 लागि खडा के आवश्यक आफ्नै र छैन।
V 08, söndag 28 februari 2021 kl 23:01